महिला कैदीबन्दीमा बढी मानसिक समस्या – इन्सेक
दैलेख ०७६ फागुन १३ गते
पुरुष कैदीबन्दीको तुलनामा दैलेख कारागारका महिला कैदीबन्दीले बढी मानसिक समस्या भोगिरहेको नेपाल प्रहरी अस्पताल काठमाण्डौंका चिकित्सक मनोरोग विशेषज्ञ डा.आशिष दत्तको टोलीले जानकारी दिनु भएको छ ।
मनोरोग विशेषज्ञ डा. दत्तको टोलीले दैलेख कारागारमा फागुन १० गतेदेखि गरेको तीन दिनको अनुसन्धानबाट उक्त समस्या पत्ता लगाएको हो ।
पुरुषको तुलनामा महिला कैदीबन्दीमा मानसिक समस्या देखिएको डा. दत्तले जानकारी दिनु भयो । १३ जना महिला कैदीबन्दी मध्ये नौ जनामा आत्तिने देखिएको र ती मध्ये दुई जनामा डिप्रेसनको समस्या देखिएको उहाँले बताउनु भयो । यो करिब सत्तरी प्रतिशत हो ।
दैलेख कारागारमा रहेका १ सय २९ जना पुरुष कैदीबन्दीमा गरिएको जाँचमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका १५ जना पुरुष मात्र भेटिएका छन् । ती मध्ये २ जना डिप्रेसन अवस्था भएको कारण मनोरोग बिशेषज्ञले औषधि सिफारिस गरेका छन् ।
स्वास्थ्य सेवा कार्यालय दैलेखले गरेको कैदीबन्दी लक्षित मानसिक स्वास्थ्य परीक्षणमा बहुविवाहको मुद्दामा सजाय भोगिरहेका महिलामा बढी समस्या देखिएको हो । कैदीबन्दीको मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण, अपराध हुँदाको अवस्था र मुद्दा चलिसकेपछिको मानसिक अवस्था बारे अध्ययन गरिएको हो ।
चिकित्सक मनोरोग विशेषज्ञ डा.आशिष दत्त र दैलेख अस्पतालका इन्चार्ज डा. निरञ्जन पन्त समेतको स्वास्थ्यकर्मीको टोलीले तीन दिनसम्म गरेको अध्ययनमा बहुविवाहको मुद्दामा सजाय भोगिरहेका महिला कैदीबन्दीमा बढी मानसिक समस्या देखिएको जनाइएको छ ।
दोश्रो विवाह गरिएको पतिसँगै बस्ने नपाउने, नागरिकता र दोस्रो विवाहबाट जन्मिएका बच्चाको जन्मदर्ता नपाउने कानूनी जटिलताले कैद भुक्तान गरिसकेपछिको जीवन अन्यौलता र सामाजिक हैसियतका विषयमा बढी चिन्ता लिने गरेको अध्ययनबाट खुलेको मनोरोग विशेषज्ञ डा. दत्तले जनाउनु भयो ।
महिलाहरूमा बहुविवाह गरेकाले जस्तै पुरुषमा लागुऔषध ओसारपसार तथा दुव्र्यसनी मुद्दामा परेका कैदीबन्दीमा आत्तिने, निरासा, हतोत्साही हुने समस्या देखिएको बताइएको छ । ‘आत्तिने र मानसिक समस्याका बिरामीलाई औषधि सेवन गर्न सुझाव दिएका छौं’ डा. दत्तल भन्नु भयो ।
कैदीबन्दीलाई लक्षित गरेर मानसिक स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम अन्तरगत स्वास्थ्य परीक्षण, परामर्श तथा औषधि उपचार गरिएको दैलेख अस्पतालका डा. निरञ्जन पन्तले बताउनु भयो । मनोरोग विशेषज्ञको सिफारिस अनुसार कैदीबन्दीको मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण गरिने दैलेख अस्पतालका इन्चार्ज डा. पन्तले बताउनु भयो ।
निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रबहादुर क्षेत्रीले नियोजित वा आवेशजन्य परिवेशमा भएको अपराध स्वीकार गरेकालाई सुधार गर्न कारागार बनाइएको बताउदै कानून व्यवहारिक हुन नसक्दा कैदीबन्दीमा मानसिक समस्या पैदा गराएको टिप्पणी गरे । समय अनुसारका कानून सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए ।
८० जना पुरुष र २० जना महिला गरी एक सय जनाको क्षमता रहेको दैलेख जिल्ला कारागारमा हाल १ सय २९ पुरुष र १३ महिला समेत १ सय ४२ जना कैदीबन्दी छन् । कारागारमा बहुविवाह गरेका महिलाबाट जन्मेका दुई वर्ष मुनिका एक बालिका र एक बालक आमासँग कारागारमा रहेको जेलर जीतबहादुर खत्रीले जानकारी जानकारी दिनु भयो ।